Dream House Soroshanу
I-Dream House i-Soroсhany ibekwe kufuphi ne-ski complex ye-Sorochany, ebusika yindawo efanelekileyo ye-skiers, i-snowboarders kunye ne-snowkiting.
Kwibala elinomhlaba, kukho indlu epholileyo enethafa elivulekileyo. Ingaphakathi lendlu lilungele ukucwiliswa emaphupheni kunye nokuphumla: ihlathi, umlambo, intwasahlobo, ukuthula kunye nokuphumla zifanelekile kwiintsapho ezinabantwana okanye kwinkampani enobungane. Ehlotyeni, unokuhambahamba ehlathini kumakhowa, amajikijolo, ukuloba, iibhaluni, ukuxhoma i-gliding.
Indlu yephupha eneefestile zepanoramic, ebekwe kwindawo ebiyelweyo eneendawo zokupaka iimoto ezi-2. Ixhotyiswe ngenkqubo yokucoca amanzi. Le ndlu inamagumbi okulala amabini ahlukeneyo (igumbi eli-1: ibhedi enye, iguqulelwa ekubeni yibhedi eyi-2 kunye nebhedi enye enearmchair, amagumbi ama-2: ibhedi eyi-2 kunye nebhedi yeendwendwe zethu ezincinci) kunye nekhitshi-igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala. isofa nembeleko, izibophelelo lokuphumla. Ubume be-chalet - amagumbi okulala ahlukeneyo anika iindwendwe ithuba lokuba ngasese kunye nokuphumla. Indawo yokuhlala ekhululekile: abantu abadala be-4 (izibini ezi-2), usana, umntwana okanye umntu omdala kwibhedi yesitulo. Iindwendwe eziphezulu: izibini ezi-2, usana kunye nomntwana / umntu omdala. Ukulala kwi-sofa ekhitshini-igumbi lokuhlala akuvumelekanga. Ngesicelo, sibonelela: isitulo esiphezulu, ibhafu, indawo yokudlala yomntwana, itafile yokutshintsha, i-radio nanny yezona ndwendwe zincinci kunye nefeni.
Umoya wehlathi kunye nentwasahlobo kwimizuzu emi-5 ngeenyawo kwindawo yokugcina "ilifa laseRashiya". Kufutshane zezi: Sorochany Golf Club, amanzi nokuzonwabisa Sorochany, Yakhroma umlambo idama, X-Land ipaki zolonwabo kunye amaxhama, Fox Nora club ukubadubula, Strausland basezifama (imizuzu engama-30 ngemoto), Russian Alpaca basezifama (35 mi ngemoto), ukuloba okuhlawulelwayo, ukukhwela ihashe nokukhwela amahashe (imizuzu engama-20 ngemoto).Infrastructure: I-Pyaterochka kunye neemveliso zefama (imizuzu emi-4 ngemoto), ivenkile ye-Loft yokutya kunye nokutya kwaselwandle (imizuzu emi-5 ngemoto), ikhemesti (imizuzu emi-4 ngemoto).